ASUS eweputara uzo ohuru nke Obere komputa na CES 2018 | Akụkọ akụrụngwa
ASUS weputara New Line of Mini PC na CES 2018
Ruben gallardo | | Ihe omume
Ndị Taiwanese ASUS na-enye akara ọhụrụ nke obere PC na CES 2018. Kọmputa ndị a nwere otu ihe: ị nwere ike idowe ha ebe ọ bụla ịchọrọ. Na mgbakwunye, ị nwere ihe maka onye ọ bụla: site na ihe atụ nwere ChromeOS na ụdị nke na-edepụta echiche nke Raspberry Pi.
ASUS bụ otu n'ime ndị agha ochie nke mpaghara ahụ ma mara nke ọma ụtọ nke ndị ọrụ. Ugbua n'ụbọchị ya ọ dị n'ihu asọmpi ahụ wee bupụta ya ederede na aha nnabata Eee PC, kọmputa ndị pere mpe nwere akara ngosi oge; Ọ bụ akụrụngwa dị ọnụ ala ị ga-ebu were ebe niile. 4dị XNUMX anyị ga-ewetara gị abụghị obere, mana site na ijikọ ha na ihuenyo mpụga, ị nwere ike ime ka ha rụọ ọrụ ebe ọ bụla ịchọrọ. Ọ bụ ihe gbasara ASUS Chromebox 3, ASUS PB40, ASUS PN40 na ASUS Tinker Board S.. Ma ka anyị lee nkọwa ndị ọzọ banyere ha niile:
1 ASUS Chromebox 3: desktọọpụ ọhụrụ na ChromeOS dị ka protagonist
2 ASUS Tinker Board S: na-eburu baton na Raspberry Pi
3 ASUS PN40 - Ezigbo dị ka ebe obibi multimedia
4 ASUS PB40: Obere PC kachasị ike na ọkwa ọhụrụ
ASUS Chromebox 3: desktọọpụ ọhụrụ na ChromeOS dị ka protagonist
ChromeOS so na ndị sonyere na mbipụta CES a na Las Vegas. O yiri ka ụlọ ọrụ na-akụ nzọ maka ịhapụ usoro ihe eji arụ ọrụ site na Google na ASUS enweghị ike ịbụ obere. Na ASUS Chrombox 3 Ọ bụ ihe atụ ọzọ nke ụlọ ọrụ ahụ ga-ebupụta na ahịa.
Ngwaọrụ a, agbanyeghị na ekpuchighi ọtụtụ nkọwa, ọ ga-ekwe omume na ọ bụ maka agụmakwụkwọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ. Ihe anyị nwere ike ịgwa gị bụ na ga-egosipụta ọgbọ asatọ nke Intel processors nakwa na ọ ga-enwe ọdụ ụgbọ USB-C. Na mgbakwunye, ọ na-egosi na ọ ga-enwekwa njikọ abụọ-band ac WiFi na ọdụ ụgbọ mmiri Gigabit Ethernet. Nke a ga-eme ka ASUS Chromebox 3 nwere ike igwu ọdịnaya 4K na gụgharia. Enweghi ekpughere ọnụahịa, ma ọ bụ ụbọchị ewepụtara ya.
ASUS Tinker Board S: na-eburu baton na Raspberry Pi
Ogwe mmepe na-ewu ewu ruo oge ụfọdụ. ASUS malitere usoro nke ya n’oge gara aga, ASUS Tinker Board. N'afọ a, ọ na-emelite ya na a quad-isi processor, 2 GB nke Ram na ebe nchekwa dị n'ime nke 16 GB.
Ọzọkwa, bọọdụ mmepe a nwere njikọ WiFi, ọdụ ụgbọ mmiri Gigabit Ethernet na Bluetooth. Na mgbakwunye, inwe ike jikọọ na mpụga hụ na i meziri ị ga-enwe dị Mmepụta HDMIYana ijikọ akụkụ dị iche iche ọ na-enye ọdụ ụgbọ USB abụọ. N'okwu a, ọnụahịa ahụ egosighikwa, mana ọ ga-agbaso onye bu ya ụzọ wee rụọ $ 60.
ASUS PN40 - Ezigbo dị ka ebe obibi multimedia
Ọzọ nke ụdị nke ndị Taiwanese gosipụtara na CES 2018 bụ obere PC ASUS PB40. Ihe nlere a, nke nwere obere pere mpe, dị nnọọ n'ahịrị nke draịvụ mpụta ma ọ bụ ebe mgbasa ozi, chọrọ ịbụ nke ahụ: ebe ntụrụndụ dị n'ụlọ gị.
Obere kọmputa a, nke nwere naanị gram 700, nwere ọgbọ ọhụụ nke Intel Premium Silver na Intel Celeron processors. Ọzọkwa, na ihu ị ga-enwe ọtụtụ ọdụ ụgbọ mmiri njikọ dị ka otu ọdụ ụgbọ USB-C, USB-A ọdụ ụgbọ mmiri, isi okwu ọdịyo isi, mgbe na azụ ị ga-enwe njikọ iji jikọọ ya na ileba anya ma ọ bụ telivishọn.
ASUS PB40: Obere PC kachasị ike na ọkwa ọhụrụ
Ọ dịkwa obere PC dị ka ụdị ndị gara aga, mana ikekwe nwere ụdị ihe agaghị eme ngwa ngwa dịka nwanne ya PN40. N'ebe ọwụwa anyanwụ ASUS PB40 bụ ihe kachasị ike na ha niile: Ọ ga-enwe Intel Premium Silver na Intel Celeron processor. Ndị nke ikpeazụ a ga-enye ngwọta dị jụụ ebe ọ bụ na ha agaghị enwe ndị fan n'ime.
Ka ọ dị ugbu a, na njikọ akụkụ, obere kọmputa a ga-enye gị 6 USB-C ọdụ ụgbọ mmiri - Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla-, yana ọdụ ụgbọ mmiri na-agbanwe agbanwe nke ga-akwado njikọ dịka VGA, COM, HDMI na DisplayPort. Ọzọkwa, ihe nlere a bụ ihe eji arụ ọrụ ma nwee ike ijikọ mgbasa ozi ngwa anya. Dịka ị nwere ike ịchọpụta, ụdị a lekwasịrị anya na azụmaahịa. Dị ka ọ dị na ụdị ndị gara aga, ụlọ ọrụ ahụ enyebeghị nkọwa banyere ọnụahịa ọ ga-amalite ma ọ bụ mgbe anyị nwere ike nweta ya n'ahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Ihe omume » ASUS weputara New Line of Mini PC na CES 2018
Byton na-egosi ụgbọ ala eletrik ya nke ọdịnihu (ya na vidiyo)
AOC na-ekwuputa nkwado nkwado ya na G2 Esports